Faribolana Sandratra : hiavaka ny fanamarihana ny Andron’ny mpifankatia | NewsMada
Faribolana Sandratra : hiavaka ny fanamarihana ny Andron’ny mpifankatia
Par Taratra sur 31/01/2017
Kolontsaina avy any amin-dry zareo tandrefana ny Andron’ny mpifankatia, ankalazaina isaky ny 14 febroary, saingy efa manomboka mahazo vahana eto amintsika. Mihamaro ireo hetsika enti-manamarika izany fa azo lazaina ho hiavaka ny an’ny Faribolana Sandratra.
Hahazo vahana ny tononkalo maneho izay fitiavana eo amin’ny olon-droa izay ao anatin’ny hetsika “Seho kely, café poezia”, efa fanaon’ny fikambanana, nanomboka tamin’ny taon-dasa. “Kindriandriana” ny lohatenin’ny antsa tononkalo, iarahana amin’i Nirihaja sy i Anna Tsoa. “Kindriandriana”, karazana kilalao fanaon’ny ankizivavy fahizay. Toy ny mahazatra, hotanterahina ao amin’ny efitrano Faribolana Sandratra, etsy amin’ny Tahala Rarihasina, ity hetsika ity, ny zoma 10 febroary tolakandro izao.
Ankoatra izay, mitohy ny antsa tononkalo, fanaon’ny mpiray faribolana etsy amin’ny Cercle germano-malagasy, isaky ny asabotsy fahefatra. Hamelona izany, amin’io volana febroary io, i Hanitra Olive sy i Heriniaina. Mitondra ny lohateny hoe “Fy tia” ny hetsika, amin’io 25 febroary tolakandro io. Araka izany, tsy miala amin’ny resa-pitiavana, noho ny Andron’ny mpifankatia, ny lohahevitra.
Na izany aza, tsy mifantoka amin’izay loatra ny ho voalaza ao. “Ilay Fy resahina eto dia ilay kanto sy hatsaran-tarehy ao amin’ny literatiora … Manova­na azy ny fitiavana, izay entina mankafy ny talenta ananana”, hoy ny fanazavan’i Riambola Mitia, filohan’ny Faribolana Sandratra eto Antananarivo.